Tshiza iindlebe zakho | Amadoda aQinisekileyo
Eyona ndlela iqhelekileyo yokucoceka iindlebe zakho kukuthunga umqhaphu, nangona oku kungashiya intsalela okanye ungonzakalisa iindlebe zakho. Abantu abaninzi basebenzisa ilaphu lokuhlamba elisebenzisa ukuhlamba iintsana, abazimanzisa ngesepha namanzi.
Kodwa kule mihla kukho izitshizi zamanzi anetyuwa ezikhemesti ezinceda ukuncibilikisa i-wax eqokelelana ngaphakathi endlebeni yakho. Ziyasebenza kakhulu, kwaye zibhetele kunee-swabs zomqhaphu esiqhele ukuzisebenzisa ebomini bethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungazicoca njani iindlebe zakho?
Ewe, ndicinga ukuba ingxaki ngeendlebe zakho kukuba uyahlamba kwaye awomi kakuhle ... sesinye sezizathu zokuba amafutha aqokeleleke ...